DEG-DEG: Xiddig Muhiim Ka Ahaa Barcelona Oo Tijaabada Caafimaadka U Maray Koox Kale – Laacibnet.net
DEG-DEG: Xiddig Muhiim Ka Ahaa Barcelona Oo Tijaabada Caafimaadka U Maray Koox Kale
Ciyaartoyda Barcelona ee uu tababare Ronald Koeman u sheegay inay iska tagaan ayaa ku hawlan sidii ay u heli lahaayeen naadiyo ay ka ciyaaraan, waxaana tijaabada caafimaadka koox kale u maray mid ka mid ah ciyaartoydii muhiimka ka ahaa Camp Nou sannadihii ugu dambeeyey.
Kubbad-sameeyaha reer Croatia ee Ivan Rakitic ayaa dib ugu laabtay kooxdiisii hore ee Sevilla, kaddib lix sannadood oo uu kaga maqnaa Barcelona.
Rakitic oo Sevilla oo uu kabtan u ahaa u qaaday Europa League xili ciyaareedkiisii ugu dambeeyey ee 2014 ayaa maanta tijaabada caafimaadka u maray naadigaas, waxaanu qalinka ku duugayaa heshiis saddex sannadood ah oo uu ugu ciyaari doono naadigiisa hore.
Khabiirkan khadka dhexe ayaa tijaabada caafimaadka ku maray caasimadda Catalonia ee Barcelona ka hor inta aanu ku laabanin Los Rojiblancos, iyadoo labada kooxoodna ay heshiis buuxa ka gaadheen saxeexa ciyaartoygan.
Lama sheegin lacagta uu Rakitic ugu laabanayo kooxda ka dhisan Andalusia, waxaase la ogaa inuu hore u diiday inuu kordhiyo heshiiskiisa Barcelona oo ay ka hadhsanaayeen 12 bilodo ka hor intii aanu tababare Ronald Koeman imanin ee aanu u sheegin inuu iska tago.
31 jirkan ayaa Barcelona u saftay 310 ciyaarood oo dhamaan tartamada ah tan iyo markii uu xagaagii 2014 kaga soo biiray Sevilla, waxaanu qayb weyn ka qaatay koobabkii ay ku guuleysteen tan iyo waqtigaas.
Afar koob oo LaLiga ah, Afar koob oo Copa del Rey ah iyo Champions League oo sannadkii 2015 ay qaadeen ayuu Ivan Rakitic kula guuleystay Barcelona.
Chalsea fans says:
Warkiinu waa war habsan ah warkii duhurkii ayaad hadeer noosheegaysaan